विद्या आन्टी र केपी अंकललाई अनुरोध– दासढुंगा प्रकरणको छानविन होस् - 761खबर.com
जेठ ३,काठमाडौँ - ३ जेठ २०५० सालको अत्यासलाग्दो दासढुंगा दुर्घटनामा बुबा जीवराज आश्रित र मदन भण्डारीको निधन भएको आज २७ वर्ष पूरा भएको छ । मदन–आश्रित बितेका यी २७ वर्ष हाम्रो परिवारको मात्र होइन, समग्र देशकै जीवन क्षतिग्रस्त भएजस्तो अनुभूति हुन्छ । उहाँहरु जीवित भएको भए, २०५२ पछि माओवादीको हिंसात्मक आन्दोलन र त्यसले उत्पन्न गरेका अरु राजनीतिक घटना हुन्थे वा हुन्थेनन्, अहिले अनुमान गर्न कठिन हुन्छ । बुबा र मदन अंकल पोखरा हुँदै चितवन जानुभन्दा अघिल्लो दिन १ जेठ ०५० मा काठमाडौमा भीषण वर्षा भएको थियो । हामी त्यतिबेला डल्लुमा बस्थ्यौं । बुबा तत्कालीन नेकपा (एमाले) को पार्टी कार्यालय रहेको बागबजारबाट डेरा आउँदै गर्दा पानी परेकाले म छाता लिएर डल्लु पुल नजिक गएँ । उहाँ एउटा पसलमा ओत लागेर बस्नुभएको थियो । मैले बुबालाई छाता ओडाएर ल्याएँ । मेरो जीवनमा बुबासँगको त्यो नै अन्तिम यात्रा बन्न पुग्यो । भोलिपल्ट २ जेठमा बुबा पोखरा जानुभयो । म र भाइ (डा. सागर न्यौपाने) स्कूल गइसकेका कारण बुबा घरबाट निक्लँदा हाम्रो भेट भएन । बुबालाई पेटको रोग थियो । डा. सुन्दरमणि दीक्षितले अल्सर भइसकेको बताउँदै धेरै हिँडडुल नगर्न, बाहिर खाना नखान सुझाव दिनुभएको थियो ।
तर, पार्टी महासचिव (मदन भण्डारी) र संगठन विभाग प्रमुख (बुबा) पोखरा हुँदै चितवन जाने कार्यक्रम पहिल्यै तय भएकाले उहाँहरु जानुभयो । पोखराबाट चितवन पुगेर अखिल नेपाल महिला संघको केन्द्रीय भेलालाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम थियो । त्यतिबेला पार्टीका मुख्य कार्यक्रम, सभा–सम्मेलन र निर्णयहरु मदन अंकल र बुबाकै सल्लाहमा हुन्थे ।
मदन अंकल र बुबा २ जेठमा पोखरा पुगेर हरि पाण्डेको घरमा बास बस्नुभयो । ३ जेठको बिहान खान खाएर अमर लामाले चलाएको जीपमा चितवन जाँदै गर्दा दासढुंगामा घटना भयो । मदन भण्डारी र बुबालाई हामीले सदाका लागि गुमायौ । त्योबेला हाम्रो डल्लुको डेरामा ल्याण्डलाइन फोन थियो । चितवनतिर लाग्नुअघि बुबाले हरि पाण्डेको घरबाट गर्नुभएको फोन मैले नै उठाएकी थिएँ । बुबाले भन्नुभएको थियो, “चस्मा लगाउन नबिर्सनू, नत्र आँखा बिग्रन्छ । अनि ममी र भाइको ख्याल गर्नू ।” आखिर त्यस्तै भयो, बुबा नभएपछि ममी, भाइ र मैले एकअर्काको हेरचाह गर्नुपर्ने बाध्यता आइलाग्यो । २०४६ अघि पार्टीका अरु नेताजस्तै बुबा पनि भूमिगत हुनुभएका कारण हामीले उहाँको सानिध्य कमै पायौं । जनआन्दोलन सफल भएपछि मात्र हामी बुबासँग काठमाडौंमा बस्न पायौं । डल्लुभन्दा अघि कालिमाटीमा हाम्रो डेरा थियो । त्यसअघि करिब चार वर्ष पोखरा बस्दा बुबा यदाकदा हामीलाई भेट्न आउनुहुन्थ्यो । बुबा व्यक्तिगत सरसफाइमा निकै ध्यान दिने अनुशासित नेता हुनुहुन्थ्यो । एकदमै अनुशाशित भएकाले अरु नेताहरु बुबाँसग हच्किन्थे । पार्टीगत र व्यक्तिगत खर्च एक–एक गरी डायरीमा टिप्ने बुबाको बानी थियो । उहाँ सिलबरे भाँडामा कोइला राखेर कपडामा आइरन लगाउनुहुन्थ्यो । बुबा घरमा हुँदा सँधै बीबीसी रेडियो सुन्नुहुन्थ्यो । उहाँ पार्टी स्थायी समिति सदस्य तथा संगठन विभाग प्रमुखको जिम्मेवारीमा रहेको भेऊ हामीले २०४६ को जनआन्दोलन पछि मात्र पायौं । एकदमै अनुशासित, कसैले झूठो बोलेको नसहने, अध्ययनशील भएकाले बुबालाई पार्टीले रणनीतिक जिम्मेवारी दिएको हुनुपर्छ । एमालेको महासचिवपछिको महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा हुनुहुन्थ्यो, उहाँ ।